XOG: AC Milan oo Biglia la heshiisey & Ricardo Rodriguez oo maalmaha soo socda kusoo biiraya – Gool FM
(Milano) 30 Maajo 2017 – AC Milan ayaa la sheegayaa inay heshiis la gaareen laacibka khadka dhexe ee Lucas Biglia, balse haatan waa inay la xaajoodaan kooxdiisa SS Lazio.
Kooxda Rossoneri ayaa xawaare ku socota dhanka suuqa kala iibsiga, iyadoo si rasmi ah ula soo wareegtey daafaca Mateo Musacchio isla markaana uu haatan caafimaadka u marayo Franck Kessié oo saaka soo gaarey Milano.
Yeelkeede, intaa kuma joogsanin oo Tuttomercatoweb ayaa haatan werinaya inay heshiis hordhac ah la gaareen Biglia oo ay beryahan daba socdeen.
Ricardo Rodriguez “wants to join Milan and there’s a very good chance it’ll go through” now Wolfsburg are safe, said the intermediary.
Dhanka kale, daafaca dadabka bidix ee kooxda Wolfsburg ee ka dheesha Bundesliga ayaa isagana la sheegayaa inuu jidka kusoo jiro sida uu xaqiijiyay isla wakiilkiiisa.
Laacibkan 24-jirka ah ee reer Switzerland ayaa u gadan Milan, balse waxaa Rossoneri ka hor taagnaa kooxdiisa oo kulan kala bax ah oo ay ku xaqiijinayso sii joogitsa Bundesliga la dheelaysey Eintracht Braunschweig, taasoo ay labada lugood 2-0 kaga badisay.
“Wada xaajoodyadu way socdaan, waxaa kaliya la sugayay kulanka kala baxa ah ee Wolfsburg” ayuu yiri wakiilkiisa Fabio Parisi oo la hadlayay Radio24.
“Waxyaabaha asaasiga ah waa la turxaan bixiyay, horay baana u soconaynaa, qof kastana wuu doonayaa inuu heshiisku guulaysto, laacibku Milan ayuu rabaa Milan-na laacibka ayay doonaysaa.” ayuu raaciyay Parisi.
Ricardo Rodriguez ayaa la sheegay inuu Milan caafimaadka u mari doono Jimcaha soo aaddan ama ugu dambayn horraanta todobaadka soo socda sida Isniin ama Arboco.
Silvio Berlusconi iyo Massimo Morratti oo abaalmarinno la siiyay + Sawirro